အကောင်းဆုံးအစွန်းရောက်အားကစားပွဲများနှင့်ပြိုင်ပွဲများ - ULLER
ထိပ်ဆုံး 10 အစွန်းရောက်အားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြိုင်ပွဲ
စွန့်စားခန်းချစ်သူများသည် adrenaline သည်စွဲလမ်းမှုသာဖြစ်သည်ကိုသိကြသည်။ စွန့်စားခန်းအားကစားများနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားများဖြင့်ဘဝကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားခြင်းသည်အလွန်အစွန်းရောက်သည့်အချိန်များနှင့်အတူစိတ်အာရုံချောက်ခြားစေသည့်စွန့်စားမှုသမားများ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အန္တရာယ်များ။
The အစွန်းရောက်အားကစားပွဲများ, ပွဲတော်များနှင့်ပြိုင်ပွဲ သူတို့တကယ်ကိုအေးဆေးပါ! ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှားပါးမှုနှင့်ဖန်တီးမှုအရှိဆုံးမှဂန္ထဝင်ဆုံးနှင့်ဒဏ္legာရီဇာတ်လမ်းများများစွာရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားကစားကုမ္ပဏီကြီးများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးကတိက ၀ တ်သစ်များကိုသဘာဝအင်အားစုများ၊ အမြင့်ဆုံးတောင်များ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာသောလှိုင်းများနှင့်အရှည်ဆုံးနှင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးလမ်းများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ရင်ဆိုင်ရသည်။
သူတို့ထဲကတချို့ကိုသင်သိသလား အကောင်းဆုံးနှင့်အစွန်းရောက်ဆုံးသောအဖြစ်အပျက်များ၊ စွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး
THE X ဂိမ်းများ
အကယ်၍ သင်သည်အစွန်းရောက်အားကစားနှင့်အလွတ်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါက X-Games ကိုကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်မှာသေချာသည်။ ဒီအစွန်းရောက်အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏နဂါးသည်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့်တေးဂီတကိုပေါင်းစပ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့မှအားကစားပညာရှင်များကိုအမျိုးအစားအလိုက်ကွဲပြားစေသည်။ ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကတည်းကဖန်တီးခဲ့ချိန် မှစ၍ ဤအရာအားလုံးကို ESPN အုပ်စု၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။
X Games ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အ X ဂိမ်းများ သူတို့ကတစ် ဦး အလွန်အထူးသဖြင့်လမ်းထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ ပြိုင်ဘက်များသည်ရွှေ၊ ငွေနှင့်ကြေးတံဆိပ်များအပြင်ဆုငွေများဖြင့်အနိုင်ရရှိခြင်းဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတွင်ကျော်ကြားသောဤပြိုင်ဆိုင်မှု၏ထိပ်တန်းရာထူးများထဲမှဖြစ်ခြင်းမှရရှိခြင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်အများအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်း X ဆောင်းရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီနှစ်ခုရှိတယ် နွေရာသီ။ နွေရာသီတွင်ပြုလုပ်မည့်ပြိုင်ပွဲ၏ repertoire တွင် Skate, BMX, motocross၊ အလွတ် roller, ချီတက်ပွဲ, Scooter (စကိတ်စီးခြင်း) နှင့် surfing, နှင့်မော်တော်ကားပြိုင်ကား။ ဆောင်းရာသီ X-Games တွင်သင်သည်နှင်းလျောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းတို့တွင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အေးမြသောအရာ X ဂိမ်းများ ၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ဝေမှုများကိုတစ်နေရာတည်း၌အမြဲတမ်းကျင်းပလေ့မရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှသည်ဂျပန်အထိကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်အခြေစိုက်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် live music ကမ်းလှမ်းသည့်ကျော်ကြားသောပွဲတော်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် ကမ်းလှမ်းသော "X ကို Fest" ပရိသတ်များ၊ ပရိသတ်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များအတွက်အားကစားသမားများနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ်ထိုးခြင်း။
Pantin Classic ဆိုတာဘာလဲ?
ယခင်က Pantin classic သို့မဟုတ် Galicia Surf Pro ဟုလူသိများသော Galicia Classic Surf Pro သည်Pantínကမ်းခြေ၊ Valdoviño (A Coruñaပြည်နယ်ရှိ) တွင်တိုက်နယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ World Surf League (WSL) ။ကမ္ဘာ့လှိုင်းစီးဆင်းမှု၏ထိပ်တန်းအရာရှိများသည်ခက်ခဲသော QS ၁၀၀၀၀ ထပ်မံစမ်းသပ်မှုတွင်တိုက်ရိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံသည်၊ ၎င်းသည်ဥရောပတိုက်နယ်တစ်ခုလုံး၏အရေးအကြီးဆုံးချန်ပီယံဖြစ်သည်။
El Abanca Galicia Classic Surf Pro ကို၎င်းသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း (ABANCA ကိုအဓိကစပွန်ဆာအဖြစ်ခံယူထားသူ) သည် Praia de Pantínကလပ်၏တာဝန်အရလည်ပတ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအမျိုးအစားများအတွက်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်ရန်နှစ်စဉ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလှိုင်းစီးသမားများသည်၎င်းတို့၏အရည်အချင်းများကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်နှင့်ပြသရန်ဤတည်နေရာသို့လာရောက်ကြသည်။
၎င်းသည်ဥရောပတစ်ခွင်၌မျှော်မှန်းထားသည့် surfing ပြိုင်ပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်လျှင်လူ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုလက်ခံကျင်းပပြီး၎င်း၏အဝတ်အစားနှင့်အားကစားပစ္စည်းများစတိုးဆိုင်များမှသည်စားသောက်ကုန်များအထိ၊ ဂီတ။ အမှန်တရားကတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးဟာအရမ်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဟာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ဗတ္တိဇံများအပါအ ၀ င်အထင်ကရလှုပ်ရှားမှုများပါ။
THE OR ပင်လယ်စာ
O Marisquiñoသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းကဥရောပ၌အရေးအကြီးဆုံးမြို့ပြယဉ်ကျေးမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုအားကစားပွဲတော်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့သုံးရက်ကြာပြင်ပပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်းအစွန်းရောက်အားကစားပြိုင်ပွဲ ၁၀ ခု၊ ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲများ၊ အလွန်အစွမ်းထက်သောအစွမ်းသတ္တိ၊ အကပြိုင်ပွဲများကိုချိုးဖျက်ခြင်း၊ အနုပညာနှင့်ရေးခြစ်ခြင်းဆန္ဒပြပွဲများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အခြားအရာများစွာတို့သည်မြို့၏သမိုင်းဝင်ခရိုင်နှင့်အလွန်နီးကပ်သော Vigo ရေကြောင်းဆိပ်ကမ်းတွင်ဖြစ်သည်။
O Marisquiñoပွဲတော် Vigo ၏သမိုင်း ၀ င်ရပ်ကွက်အနီးရှိစတုရန်းမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်သောinရိယာတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Paseo de las Avenidas၊ Trasatlánticosဆိပ်ခံတံတား၊ အဆိုပါ Breakwater ။ အဲဒီမှာအားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြပွဲတစ်ခုစီအတွက်နေရာများကိုပြသထားသည်။ ၎င်းသည်ဤမြို့၏အထင်ကရဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
El ဒါမှမဟုတ်Marisquiño ကမ္ဘာ့ဖလား (၃) ခု၊ ကမ္ဘာ့ဖလားစကိတ်စီးခြင်းလမ်း၊ ကမ္ဘာ့ဖလားစကိတ်စီးခြင်း Miniramp နှင့် Dirt FMB World Tour တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သွင်းယူထားသောအကောင်းဆုံးနှင့်အားကစားသမားများအားလုံး၊ မကြာသေးမီက FIBA ​​3x3 Basket ကိုစည်းကမ်းချက်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးရွှေအမျိုးအစား Dirt Jump သို့ခုန်ကျော်သွားသည်။
ဘာလဲGrandvalira စုစုပေါင်း Fight?
Grandvalira Total Fight သည်အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာမှနှင်းလျောစီးနှင့်အားကစားပြိုင်ပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါက အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မှု ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အရည်အချင်းတွေ၊ လှည့်ကွက်တွေနဲ့မူလစတိုင်ကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအမျိုးအစားခွဲခြားထားလို့ပါ။
ဒီ Slopestyle နှင်းလျောစီးနှင့် freeski ယှဉ်ပြိုင်မှုကျင်းပခဲ့သည် en အဆိုပါ Snowpark အယ်လ် Tarter က (ကျွန်းဆွယ်ရှိရှေ့ဆောင်ပန်းခြံများထဲမှတစ်ခု) ၎င်းကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ အဆတိုးများလာခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်း၏ဒုတိယထုတ်ဝေမှုအတွက် TTR (Ticket To Ride Tour) ပြက္ခဒိန်တွင်ကြယ်သုံးပွင့်ရရှိသည်။ နိုင်ငံတကာနှင်းလျှောစီး.
သို့သော် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် TTR တိုက်နယ်ကသူ့ကိုကြယ်တစ်ပွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကကြယ် ၄ လုံးသည်နိုင်ငံတကာတွင်ကြီးမားသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးဘူတာရုံကိုရောက်စေခဲ့သည် နင် မြေပုံထဲမှာ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်များစွာသောဆိုက်ရောက်နှင့်တိုက်ဆိုင် မြင်းစီး ပါ ၀ င်လိုသည့်နေရာနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ရှိခြင်း။
ဥရောပတောင်ပိုင်း၌အကြီးမားဆုံးသောအကပြိုင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သော Grandvalira Total Fight သည်နောက်ဆုံးတွင် (၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်) ကြယ်ပွင့်အားကစားနှင်းလျှောစီး၌ TTR တိုက်နယ်တွင်ကြယ် ၅ ပွင့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ AFP ဆားကစ်ထဲမှာရွှေအမျိုးအစားfreeski အတွက်နိုင်ငံတကာရည်ညွှန်း။
Dakar Rally လမ်းကြောင်း: ဒါကဘာလဲ။
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း Dakar ပြိုင်ပွဲသည်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းအကြီးမားဆုံးနှင့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးသောပြိုင်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ယခင်က Rally Paris-Dakar ဟုခေါ်တွင်သောကားသည်နှစ်စဉ်မော်တော်ကားပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည် ချီတက်ပွဲဝင်ရောက်စီးနင်း, ASO (Amaury Sport Organization) မှ ၁၉၇၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်မှစတင်ဖွဲ့စည်းသည်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုစတင်ခဲ့သည့်အခါပြိုင်ပွဲသည်ပဲရစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးအနောက်အာဖရိကရှိဆီနီဂေါမြို့တော်တွင်ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀၀ အထိအထမြောက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Buenos Aires (အာဂျင်တီးနား) တွင်စတင်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် 10.000 ခုနှစ်တွင်၎င်းကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းဆော်ဒီအာရေဗျတွင်အဆင့် ၁၂ ဆင့်၊ အချိန်ကီလိုမီတာ ၅၀၀၀ နှင့်စုစုပေါင်းခရီးသွား ၇,၈၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ Dakar ပြိုင်ပွဲသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံးနှင့်စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးပြိုင်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဘက်များသည်ပြိုင်ဘက်များကသူတို့၏အားတက်မှု၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အားကစားစွမ်းရည်များကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအခက်ခဲဆုံးမြေအနေအထားတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
UTMB T ကရထားလမ်း (ULTRA-TRAIL DE MONT-BLANC)
Ulta-Trail de Mont-Blanc သည်နိဒါန်းအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ဤကျော်ကြားလှသောအလွန် Ultra Mountain မာရသွန်ကို Alps တွင်နှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။ ပြင်သစ်၊ အီတလီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့တွင်ဖြတ်သန်း။ ပြိုင်ဘက် ၁၀၀၀၀ ကျော်သည်အကွာအဝေး ၁၇၂ ကီလိုမီတာနှင့်မီတာ ၁၀,၀၀၀ ခန့်ကွာခြားမှုရှိသည်။ ကမ္ဘာ့လမ်းကြောင်းအထက်တန်းလွှာသည် Chamonix ၌နှစ်စဉ်ကျင်းပသည့်ပြိုင်ပွဲ ၇ ပွဲတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အပျော်တမ်းအပြေးသမားများနှင့်အတူနှစ်စဉ်တွေ့ဆုံသည်။
Montblanc UTMB Ultra Trail ဆိုတာဘာလဲ။
လက်ရှိတွင် UTMB သည်လူသိအများဆုံး Trail Running ပြိုင်ပွဲအဖြစ်လူသိများသည်။ ကိုယ်စားပြုကြောင်းတစ်ဖွဲ့လုံးဒဏ္icalာရီပြိုင်ပွဲ အတော်လေးထူးခြားတဲ့အတှေ့အကွုံ! အမှန်တရားမှာပူးပေါင်းရန်ဖြစ်သည် Mont-Blanc ဝန်းကျင်ရှိပြိုင်ပွဲသည်အဓိကအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ အပ်နှံခြင်းနှင့်တွန်းအားသည်လှပသောထိပ်များသို့ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဆုံးပန်းတိုင်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင် ဦး တည်သည်။ ယခုအချိန်အထိ Montblac ultratrail စံချိန်ကို Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) ကိုနာရီ ၂၀၊ ၁၉ မိနစ်နှင့် ၇ စက္ကန့်တွင်အနိုင်ရခဲ့သော Pau Capell ကသိမ်းထားသည်။
နိုင်ငံတကာအားကစားပွဲတော် (FISE) ၏နိုင်ငံတကာပွဲတော်
၎င်းသည်ဥရောပတစ်ခွင်၌အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီသူသည်နိုင်ငံတကာအစွန်းရောက်အားကစားပွဲတော် (FISE) ကိုတင်ဆက်သည် Montpellier ၏ဗဟိုတွင် Rives du Lez ခရိုင် (ပြင်သစ်) ကများစွာရှိသည် စကိတ်၊ roller၊ စကိတ်ဘုတ်၊ လွတ်လပ်စွာစီးနင်းနိုင်သည့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ နိုးဘုတ်၊ တောင်တက်စက်ဘီး၊ အများဆုံးအစွန်းရောက်စွန့်စားမှု၏ချစ်သူများများအတွက်ဒီဇိုင်းကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခု!
ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ ၀ န်းကျင်သည်အလွန်ပျော်ပျော်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်ပြည့်စုံစွာ adrenaline ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၅ ရက်တာအတွေ့အကြုံဖြင့်ပရိသတ် ၅၅၀,၀၀၀ ခန့်ကိုရောက်ရှိစေပြီး၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အကောင်းဆုံးသောအားကစား၊ ပါတီပွဲ၊ အားကစား၊ ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားနှင့်အလွတ်သမားများအတွက်ပျော်စရာများစွာ။
FISEတှငျမှေးဖှား Montpellier​ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်တောင်ဘက်သို့၎င်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စ၍ FISE World Series သည်စတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏အဖြစ်အပျက်များကိုဤချန်ပီယံအကောင်းဆုံးကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိနေရာအမျိုးမျိုးသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သနည်း။
အဆိုးရွားဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံးလူမျိုးများအနက်ခေါင်းဆောင်ကို ဦး ဆောင်သည် ခြုံတော မာရသွန် o တောတွင်းမာရသွန်။များအတွက်သီးသန့်ယှဉ်ပြိုင်မှု အပြေးသမား အဘယ်ကြောင့်အားလုံး၏သတ္တိနှင့်အများဆုံးစွန့်စား? ကောင်းပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာသာမန်နဲ့သာမန်လူတွေရဲ့မာရသွန်ပြေးမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်တောနက်၏အန္တရာယ်များကိုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိရသောဘရာဇီးလ်အမေဇုန်တွင်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည်။
မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ၇၅ ခုသည်ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်ကာလအတွင်းအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီအောက်မကျဘဲ ၉၉% စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောရာသီဥတုတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုများကြုံတွေ့ရသည်။ မြစ်များကို ဖြတ်၍ မြစ်များကို ဖြတ်၍ မျောပါလာသောမျောပါမျောပါများ၊ အလင်းအနည်းငယ်သာ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်မြွေမှကြက်ငှက်တုပ်ကွေးအထိကြောက်မက်ဖွယ်သတ္တဝါများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဟုတ်တယ်၊
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တရားဝင်စတင်ခဲ့သော Jungle Marathon သည်အကွာအဝေးသုံးမျိုးဖြင့်ကျင်းပသည်။ အတိုဆုံးထုတ်ဝေမှုသည် ၄၂.၂ ကီလိုမီတာဖြစ်သည်။ သို့သော်အကွာအဝေး ၁၂၇ ကီလိုမီတာကိုလေးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးဗားရှင်းမှာစုစုပေါင်း ၂၅၄ ကီလိုမီတာကိုဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနှင့်အဆင့်ဆင့်ခြောက်ဆင့်ပါဝင်သည်။
စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာလမ်းကြောင်းတွင်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါကယှဉ်ပြိုင်သူများသည်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်သူတို့၏အစားအစာနှင့်ရေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သောကြောင့် minstrel စိန်ခေါ်မှုများခြောက်ရက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေလျှင်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမိုးအကာများကိုတည်ဆောက်ပြီးတောတွင်း၌သင့်အားစောင့်ကြိုနေသောအတားအဆီးများကိုရင်ဆိုင်ပါ။ ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသင် ၀ င်ဝံ့ဝံ့မလား။
Sea Otter Classic ဆိုတာဘာလဲ။
ဘယ်လိုပင်လယ် Otter ဂန္ထဝင်ဖော်ပြရန်မ! ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးပြင်ပစွန့်စားမှုအားကစားနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှစ၍ ကယ်လီဖိုးနီးယား (အမေရိကန်)၊ Monterey ကောင်တီရှိ Fort Ord အဟောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအဖြစ်အပျက်ကို“ ပင်လယ် Otter Classic” ဟုခေါ်တွင်သည်။ ပထမဆုံးထုတ်ဝေသည့်ပွဲတွင်အားကစားသမား ၃၅၀ နှင့်ပရိသတ် ၁၅၀ ကိုကြိုဆိုခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိတွင်အားကစားသမား ၉၆၀၀ ကျော်ကိုလက်ခံကြိုဆိုပြီး၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၏အကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့မြင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ၏အဓိကစက်ဘီးပွဲတော်၌စွန့်စားမှု ၄ ရက်ပြည့်သောပရိသတ်စုစုပေါင်း ၇၂၅၀၀ ကျော်ကိုကျော်တက်သည်။
၁၉၉၁ မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိပင်လယ် Otter Classic သည်မတ်လတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ သို့သော် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၏ပျော့ပြောင်းသောရာသီဥတုကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်၎င်း၏ရက်စွဲကိုtoပြီလသို့ပြောင်းခဲ့သည်။
Sea Otter ဥရောပစက်ဘီး Show Giron ဆိုတာဘာလဲ။
ဥရောပ၌ Girona - Costa Brava တွင်ပင်လယ် Otter Europe ဆိုင်ကယ်လည်းရှိသည်။ 2017 မှစတင်ခဲ့ပြီး Sea Otter Classic မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အရည်အချင်းရှိသောလူငယ်များနှင့်အားကစားတွင်တည်ထောင်ထားသောပညာရှင်များအတွက်ဥရောပ၏စက်ဘီးပွဲတော်များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
Barkley Marathon ဆိုတာဘာလဲ
သင်ဒီထူးဆန်းပြီးအလွန်စပ်စုသောစွန့်စားမှုပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းအများကြီးကြားဖူးမည်မဟုတ်သော်လည်း Barkley မာရသွန်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအဆိုးရွားဆုံး၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအားကစားပွဲများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မာရသွန်၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လူ ၁၅ ယောက်သာသူတို့၏အန္တရာယ်နှင့်ခက်ခဲသောခရီးကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးနိုင်ခဲ့သည်။
၎င်းကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် Gary "Laz" Cantrell မှစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းကို "Lazarus Lake" ဟုသာလူသိများသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဝေးကွာသောပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးသာမန်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများထက် ကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးနှင့်အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင်ကခန့်မှန်းပြီးပြီ၊ အားလုံးကသမားရိုးကျပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူး၊ တကယ်တော့ဒါဟာအတော်လေးထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းဟာလျှို့ဝှက်ပြီးခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုသင်ရိုးညွှန်းတမ်း) သင်သည်ထူးဆန်းသောပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်အခွင့်ထူးခံအပြေး ၄၀ တွင်ပါဝင်ခွင့်ရကောင်းရနိုင်သည်။ Barkley မာရသွန်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Tennessee ပြည်နယ်ရှိအမည်မသိသောနေရာတွင်လျှို့ဝှက်ဆင့်ခေါ်သည့်နေ့၌ပြုလုပ်သည်။
Barkley Marathon ၏ရည်မှန်းချက်မှာစုစုပေါင်းကီလိုမီတာ ၁၆၀ ကိုနာရီ ၆၀ အတွင်းဒေါင်လိုက်ကျဆင်းမှုဖြင့်မီတာ ၂၀၀၀၀ ကျော်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ရွက်လွှင့်ခြင်း ၅ ချက်ပါ ၀ င်ပြီးအကွာအဝေးမှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ အများဆုံးအစွန်းဆုံးအပိုင်းမှာမညီမညာဖြစ်နေခြင်း၊ အကောင်းဆုံးနေရာကိုရှာဖွေရန်နှင့်အာကာသအတွင်းတည်နေရာနှင့်ပြိုင်ဘက်များစွန့်စားရသည့်မသိသောအခြေအနေများမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်တည်နေရာနှင့်မည်သည့်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤပြိုင်ဆိုင်မှု၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ဆွဲဆောင်မှုသည်ရှင်သန်မှုနှင့်တည်ရှိမှု၏အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်လမ်းလျှောက်နေစဉ်နေရာ၌ဝှက်ထားသောစာအုပ် ၁၄ ပုဒ်ပါသည့်စာမျက်နှာများကိုစုဆောင်းရန်နေရာထဲတွင်သင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်များအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်လမ်းကြောင်းအမှန်ကိုမှန်ကန်စွာပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်စတင်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရမည်ဖြစ်သည်။ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးလား။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ မည်သည့်အကူအညီများနှင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များမရှိဘဲအပြေးသမား ၄၀ သည်သူတို့နှင့်သဘောသဘာဝအရစွန့်စားထွက်ခွာသွားကြသည် GPS, မပါဘဲ bib, သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်နာရီ။ဤအရာသည်အဖွဲ့အစည်းမစခင်သူတို့ထံမှရရှိသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
Barkley မာရသွန် Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Su လူကြိုက်များများပြားလာခဲ့သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအထူးသဖြင့်၏ 2014 ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် ၎င်း၏လူငယ်စားသောလူမျိုး (လူငယ်စားသောလူမျိုး)ဤထူးဆန်းပြီးအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်မှုကိုပြသသည့် Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်။ လာဇရုရေကန်ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရမလား။
သငျသညျငါတို့ကဲ့သို့သလောက်အစွန်းရောက်စွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲများနှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူ hallucinate ပါသလား သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
ဆီးနှင်းများတွင်အစွန်းရောက်အားကစားကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်ကောင်းမွန်သောနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးများကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သဘာဝတရား၏အန္တရာယ်ကိုကျော်လွှားရန်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။5ကိုရှာဖွေပါ
ကော်လိုရာဒိုတောင်စောင်းများ၏အရှိန်ကိုအရှိန်ဖြင့်စီး။ မယုံနိုင်လောက်အောင်တောင်စောင်းကိုစီးနေစဉ်စင်ကြယ်သောလေကိုခံစားနေရသည်။ ကော်လိုရာဒိုနှင်းလျှောစီးအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိလိုပါသလား။ ဟုတ်တယ်